काठमाण्डौका यी म´नकारी घरध´नी, जसले कोरना भा´इरससंग लड्न क्वारेन्टाइनको लागि आफ्नो घर नि:शुल्क दिदै ! – Butwal Sandesh
काठमाण्डौका यी म´नकारी घरध´नी, जसले कोरना भा´इरससंग लड्न क्वारेन्टाइनको लागि आफ्नो घर नि:शुल्क दिदै !
काठमाडौं । विश्वमा कोरोना भाइरस को त्रा´स फैलिरहेको बेलामा नेपालमा पनि सजगता अपनाइएको छ । नेपालमा अहिले सम्म कोरोनाको सं´क्रमण नदेखिएपनि भित्रिन नदिन सा´वधानी अपनाइएको छ । सरकारले औषधी र अस्पतालको ब्यवस्था गरेको जनाएको छ । सरकारलाई कोरोना वि´रुद्ध सजगता अपनाउन सहयोग गर्दै स्थानिय तवरवाट पनि आह्रवान हुन थालेको छ । काठमाडौंमा हुन सक्ने कोरोनाको सं क्रमणवाट बचाउन काठमाडौंका २ जना घरधनीहरुले आफुहरुको घरलाई नै क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई आह्रवान गरेका छन् ।
कोरोना विरुद्धको लडाई सरकारको मात्र नभएर सर्वसाधारणको पनि दायित्व भन्दै उनीहरुले आफ्ना घरलाई क्वारेन्टाइनक रुपमा प्रयोग गर्न आह्रवान गरेका हुन् । कोरोनाको आशं´का गरिएका ब्यक्तिलाई १४ दिन सम्म राख्न आफ्ना आलिशान भवनलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
यस्तै काठमाडौंकै अर्का घरधनी लालचन्द्र गौतमले पनि आफ्नो कुलेश्वरमा रहेको आफ्नो खाली घरलाई पनि क्वारेन्टायनका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् । विक्रीका लागि राखेको घर अहिले खाली छ । त्यसैले त्यो घर पनि क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।